03 Jan, 2020 - 00:01	 2020-01-02T19:19:05+00:00 2020-01-03T00:00:03+00:00 0 Views
NDIRI murume ane makore 33, handina chirwere uye ndotsvaga mudzimai wekuroora akatendeka ane makore 19 kusvika 30. Ndogara muHarare uye ndinoshanda. Zvakawanda pamusoro pangu munondibata pa0713 554 707.
Makadini? Ndanyorera ndanyorerazve ndishambadzeiwo. Ndiri murume ane makore 47 nevanasikana vaviri vakura. Ndogara muHarare uye ndotsvagawo mudzimai wewanano. Ada ndibate pa0785 368 815, totaurina zvizhinji.
Makadiniko veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 33 uye ndodawo mukadzi wekugaa naye. Nhare yangu 0784 958 474.
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 30, ndinotsvaga mudzimai ane makore 28 zvichidzika. Ndinoda anorevesa, totaura pa0714 276 674.
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 30 nemwana 1, ndinotsvaga mudzimai ane mwana kana asina ane makore 28 zvichidzika. Ndinoda anorevesa totaura pa0714 276 674.
VeKwayedza makadini? Ndiri mudzimai ane makore 46 nevana 2, ndinotsvagawo murume anoshanda. Ini ndinoita mubato wemaoko. Ngaave ane makore 50 kusvika 60 uye ari pamushonga asingaratidzi. Tatenda, nhare yangu 0771 106 476.
Ndiri mukadzi ane makore 25 nemwana 1, ndotsvagawo murume ane makore 27 – 35 ari pamushonga asingaratidze kurwara. Ngaave anozvishandira asina mukadzi, ane mwana 1 kana 2. Nhare yangu 0782 048 974.
Makadii? Ini ndiri mukadzi ane makore 29, ndinotsvakawo murume asiri pamushonga uye asina mukadzi. Mwana ndine 1, ndobatika pa0778 362 928.
Makadii veKwayedza? Ndiri kutsvagawo musikana anoda kuroorwa ane makore 18 – 23 ane mwana kana asina. Ini hangu handina mwana, nhare 0777 021 106.
Makadii veTishamwaridzane? Ndiri mukomana ane makore 29, ndotsvagawo musikana anoda imba anonamata ane makore 19 kusvika 26 uye ari negative. Nhare yangu 0776 925 290.
Ndiri murume ane makore 28, ndotsvaka mukadzi anotya Mwari. Anondida ngaandibate pa0775 313 215.
Ndine makore 42 nevana 2 uye ndiri negative. Ndotsvagawo mukadzi ane makore ari pasi peangu. Nhamba yangu 0712 592 508.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 27, ndinotsvagawo mukadzi ane makore 19 kusvika 25 ari pamushonga. Andida anondibata pa0714 705 848.
Makadii Tishamwaridzane? Ndiri murume ari kutsvaga musikana sezvo ndisati ndambowana. Ndinoda kubva pamakore 19 – 26 asina mwana seni. Ndatenda hangu, nhare ndibatei pa0716 577 987.
Makadii? Ndotsvagawo murume akavimbika uye ane rudo, vana ndine 4. Makore ekuberekwa i36. Mukashambadza tsamba yangu ndingafare chokwadi. Ndobatika pa0783 587 945.
Ndiri murume ane makore 46 uye ndiri mushandi wezveutano. Ndotsvaga mukadzi ane makore 28 kusvika 34 asina mwana. Nhare yangu 0775 182 420.
Makadini vabiki vechirongwa? Ini ndiri mukadzi ane makore 37, ndotsvaka murume anoda zvemba. Ngaave ane makore 40 kusvika 59 ari pamushonga. Andifarira anondibata pa0772 605 382.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 31 nevana 2, ndodawo murume ane makore 35 zvichikwira asingarware. Zvakawanda totaura pa0779 678 998.
Makadini? Ndotsvakawo mukadzi wekuroora ari pamushonga ane makore 20 – 30. Ini ndine makore 26 ndodawo anoshanda achigara kuMidlands. Nhare yangu 0783 368 303.
Makadii? Ndotsvagawo mukadzi wekufambidzana naye ari HIV positive seni. Andida ngaandibate pa0784 559 657 chero nguva.
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 30, ndotsvagawo mudzimai anoda zvemba. Ngaave ari pamushonga ane makore 20 kusvika 28. Andida ngaandibate pa0774 617 565.
Makadii munaShe? Ini ndosimba, ndakambonyorera uye ndodawo mudzimai anotya Mwari. Ngaave anoda zvemba uye anoda kunoongororwa ropa ane makore 20 kusvika 28. Ini ndine makore 36 nevana 3. Ndiri kuChivhu uye handishandi. Nhare yangu 0777 728 528.
Makadii? Ndiri murume ane makore 30 ndotsvagawo mukadzi ane makore 20 – 22 akavimbika, matsotsi kwete. Nhamba dzangu 0778 323 817.
Vainyorera pa0773 985 245 chiregai henyu, ndakamuwana. Ndinotenda veTishamwaridzane.
Makadini veKwayedza? Ndanzwa nekunyora shambadzo yangu. Ndiri mukomana ane makore 26 uye ndoda mukadzi ari pachokwadi ane makore 18 zvichikwira asina chirwere. Anogara muHarare ngaandibate pa0712 493 547.
Ndiri mukadzi ane makore 38 nevana vatatu, ndinotsvagawo murume ane makore 40 zvichikwira uye ari pamushonga. Ari pachokwadi ndibatei pa0772 904 637.
Makadii? Ndotsvagawo mukadzi ari serious ane makore 18 kusvika 24. Ndogara muHarare, anoda ngaandibate pa0774 407 896.
Ndiri murume ane makore 37, ndinotsvagawo mukadzi akatendeka anotya Mwari akavimbika ane makore 35 zvichidzika. Anondibata pa0718 315 256.
Makadini Tishamwaridzane? Vanga vari kufona nekuisa mameseji pa0713 429 298 ngavachirega, ndakazomuwana. Ndinotenda.
Makadii? Ndiri mukomana ane makore 23 uye ndiri pamushonga asi handiratidze. Ndinodawo musikana kana mukadzi wekudanana naye. Ndogara kuChitungwiza, nhamba dzangu 0718 806 534.
Ndiri murume ane makore 32, ndodawo musikana ane makore 18 kusvika 25 asiri pamushonga anoda imba. Matsotsi musatipedzere nguva, nhamba yangu 0778 782 054.
Makadiiko Kwayedza? Ndinotsvagawo musikana ari pachokwadi anoda zveimba. Ngaave ane makore 18 – 29, ndanzwa nematsotsi. Nhare yangu 0778 651 571.
Ndiri murume ane vana uye ndiri negative. Ndotsvagawo musikana wekuroora ane makore 19 – 27 asati ambopinda mumba. Ndine makore 38, nhamba dzangu 0714 276 337.
Makadii? Ndiri musikana ane makore 21, ndotsvagawo mukomana wekushamwaridzana naye ane makore 25 kusvika 30. Ngaave asiri pamushonga, zvizhinji tozotaura pa0772 880 783.
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 35 nevana 2. Ndinodawo mukadzi ane makore 25 – 35 ane vana vake. Ndiri positive, nhare yangu 0716 034 890.
Makadii veKwayedza? Ndiri murume wemakore 39, ndodawo mukadzi wekuroora ari pachokwadi uye asiri pamushonga. Ngaave ane mwana mumwe, andida anondibata pa0774 466 832.
Tishamwaridzane, ndiri mudzimai ane makore 43 uye ndinotsvagawo murume anogara kuManicaland ane makore 43 kusvika 65 asiri pamushonga. Nhare yangu 0782 169 445.
Makadini veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 39, ndiri HIV positive uye handisi kushanda mazuva ano. Ndotsvagawo murume ane makore 40 kusvika 43 ari kuda zvekuroora anoshanda muHurumende kana rimwe basa. Matsotsi kwete, ndoda ari serious, nhamba dzangu idzo 0777 170 541.
Makadiniko? Ndiri murume ane makore 35, ndinodawo mukadzi ane makore 18 – 32 chete. Zvakawanda tozotaura, nhamba dzangu idzo 0717 901 060.
Ndiri kuda musikana wekuroora ane makore 18 – 30. Ini ndine makore 33, handisati ndamboroora uye handisi pamushonga saka ndodawo asiri. Mutsvuku ane magadziko ngaandibate pa0716 633 867.
Ndiri murume ane makore 42, handisi kutsvaga mudzimai wekurora, ndinotsvaga wekuita naye mwana. Tumirai sms pa0716 849 685.
Makadii veKwayedza? Ndinotsvagawo musikana anoda kuroorwa ane makore 18 – 23 ane mwana kana asina, ini hangu handina. Nhare yangu 0712 064 715.
Makadini vehama? Ndiri mukadzi ane makore 39 ekuberekwa nevana vatatu uye ndinotsvagawo murume anoda zvemusha ari pachokwadi ane makore 42 zvichikwira. Anoda ngaandibate pa0771 115 211.
Makadii henyu vechirongwa? Ndiri mukomana ane makore 23 ndinotsvakawo musikana ane makore 18 – 22 ari serious nezveimba. Andibate pa0782 622 042, ndatenda.
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 27 okuberekwa nemwana 1 uye ndinotsvagawo shamwarikadzi ine makore 23 kusvika 26. Andifarira anondibata pa0716 097 814 asi matsotsi uyezve vari pamushonga kwete.
Makadii? Ndiri murume ane vana 2 ndotsvagawo mukadzi ane makore 18 – 35 ari HIV- wekufambidzana naye. Ndine makore 35, nhamba dzangu 0783 685 677.
Makadiiko veKwayedza? Ndiri murume ane makore 52 okuberekwa uye ndinotsvagawo mukadzi wekushamwaridzana naye ane makore 40 zvichikwira. Vakadzi vevaridzi kwete, vanoda kufona nhare idzo 0714 845 016.
Makadii zvenyu? Ndiri mukadzi ane makore 31 uye ndinotsvagawo murume ane makore 35 zvichienda mberi asina mukadzi. Ngaave anoshanda ari HIV negative. Anenge andifarira zvizhinji tozotaura pa0773 307 052.
Ndiri mukomana ane makore 27, ndinotsvagawo mudzimai wekuroora ane makore 18 kusvika 26. Nhamba dzangu 0785 476 235.
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 40, HIV positive uye ndiri kutsvagawo mukadzi ane makore 30 kusvika 37 ari pamushonga asi asingaratidzike seni. Ane mwana 1 kana 2, ini ndine mwana 1. Andifarira ngaandibate pa0713 745 848.
Ndiri mukadzi ane makore 35 nemwana mumwechete. Ndinoda murume akarongeka asiri tsotsi anoziva Mwari kwete benzi. Nhare yangu 0786 835 126.
Ndiri mukomana ane makore 24, ndiri kutsvaga musikana ane makore 18 – 20 ari kuda zvemba. Ndinoshanda uye handina chirwere, ndonzi Alton nhamba yangu 0714 172 690.